> Resource > FCP > Beddelaan AVCHD in ay Final Cut Pro leh tayo wanaagsan
Si toos ah FCPX karaa dejinta files AVCHD, ama waxay weli u baahan yihiin in hore loo roggi? Waxaan leeyahay MTS files ka Panasonic GH2 fiidiyo ah digital ku jira AVCHD in ay yihiin grayed baxay marka aan iyaga soo dhoofsadaan.
-Travisimo Ka Apple Community
Sida Travisimo, waxaad inta badan ordo galay arrinta incompatibility markii wareejinta footage AVCHD in Final Cut Pro, xitaa aad ka dib aalada . Dhab ahaantii, aad dajiyaan karaa wax videos in FCP u tafatirka siman iyada oo aan u baahan in ay geek ah qaabab iyo codecs. Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate for Mac , waa mid aad u donable. Hoos sharaxayaa sida loo sameeyo waa talaabo talaabo ah. No dhididka!
Diyaarinta: Free download AVCHD in FCP Converter maxkamad version :.
Fiiro Gaar ah: Tani AVCHD in Converter FCP waa cross-madal. Haddii aad tahay qof user Windows ah, waxaad u tagi kartaa si Video Converter oo ay maamushaa in Windows 8/7 / XP / Vista. Hoos hage qaadataa shaashada Mac, kaliya aad hubiso in aad kala soo bixi version saxda ah.
1 dar files AVCHD aad
Connect aad fiidiyo ugu Mac, ka dibna lagu daahfuri AVCHD si FCP Converter Mac. Kolkiiba, dhammaan faylasha AVCHD diiwaan Lagu arki karo in interface barnaamijkan ee. Wakhtigan, aad untick kartaa "Dooro All" doorasho iyo uun sax waxa aad rabto, ka dibna riix "Load" ikhtiyaarka in ay iyaga ku shuban.
Talooyin: Barnaamijkaani wuxuu bixiyaa browser ah warbaahinta si aad u maareyso video deegaanka, audio iyo downloads. Waxaad ku dari kartaa video ka fayl aad galay category iyo si dhakhso ah u heshaan iyaga ka dib adigoo gujinaya .
2 Dooro FCP sida qaab wax soo saarka
Si aad u dajiyaan files MTS in FCP, aad u baahan tahay si loogu badalo in ay qaabab ay taageerayaan, kuwaas oo DV, HDV, P2 MXF (DVCProHD), XDCAM iyo 2k qaabab film. Si kastaba ha ahaatee, si loo hubiyo tayada ugu fiican, Video Converter Ultimate for Mac fursado kale oo ka soo hadhay caadi video saarka bixisaa.
Presets qaybiyay u FCP, qeexidda caadiga ah.
Codecs Native sida ProRes, Apple Dhexe codec u FCP si loo hubiyo natiijada ugu fiican ee marka sixiddiisa in FCP.
Intaas waxaa sii dheer, haddii aad doonayso in aad cadaadin file wax yar, waxaad sidoo kale riixi kartaa icon marsho in ay gacanta ula qabsadaan heerka xoogaa ah, heerka jir, xallinta, iwm
3 bilow diinta AVCHD in FCP
Ka dib markii doorashada qaabka wax soo saarka midig, haatan kaliya ka dhacay button badalo dhinaca midigta hoose ka furmkidoona AVCHD in ay Final Cut Pro diinta. Inta lagu guda jiro qaab beddelidda, aad arki doonaa bar nidaamsan loogu talagalay in lagu muujiyo boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay.
Marka dhan laga badalay dhameysatay, riix "Output Open" daaqada pop-up si aad u ogaato faylasha la gediyay. Hadda waxaad tegi kartaa ka hor si ay u muujiyaan in aad creativeness on iyaga sixiddiisa la Final Cut Pro istareexsan.
Sida loo soo dhoofsadaan MOV in iMovie?